“Ciyaaryahan ka tirsan Juventus ayaa iga codsaday inaan noqdo badalka Allegri” – Mourinho – Gool FM
“Ciyaaryahan ka tirsan Juventus ayaa iga codsaday inaan noqdo badalka Allegri” – Mourinho
(Italy) 21 Maajo 2019. Macalinka reer Portugal ee Jose Mourinho ayaa si maldahan u sheegay in Cristiano Ronaldo uu weydiistay inuu noqdo badalka Massimiliano Allegri ee kooxda Juventus xagaagan.
Hadalka Jose Mourinho ayaa wuxuu imaanayaa, kaddib markii ay maanta oo Isniin ah soo baxeen warar ku aadan in Cristiano uu ku cadaadinayo maamulka Bianconeri inay u magacaabaan ninka ay isku wadanka yihiin inuu noqdo badalka Allegri.
Tababare Jose ayaa kala soo shaqeeyay Cristiano Ronaldo xiligii ay ku wada sugnaayeen kooxda Real Madrid inta u dhexeesay 2010-kii ilaa iyo 2013, waxayna si wada jir ah ugu wada guuleysteen Copa del Rey iyo hal jeer ee ah horyaalka La Liga ee dalka Spain.
Laakiin haatan macalinka reer Portugal ayaa haatan sheegay in mid ka mid ah ciyaartoydiisii ​​hore uu ka codsaday, inuu tababare u noqdo kooxda Juventus xagaagan.
“Mid ka mid ah ciyaartoyda aan xiriir fiican la leeyahay, kaasoo haatan u ciyaara kooxda Juventus, ayaa ii sheegay inay muhiim tahay inaan tago Bianconeri xili ciyaareedka soo socda, balse waxaan u sheegay: inaysan i jecleen iyaga”.
“Wuxuu ii sheegay, guuleyso saddex kulan, waxay bilaabi doonaan inay ku jeclaadaan”.
War sidaha reer Talyaani ee “Tuttosport” ayaa wuxuu dhankiisa sheegay in Jorge Mendes oo ah wakiilka Jose Mourinho iyo Cristiano Ronaldo uu dhex dhexaadin doono heshiiskan si uu u dhameystirmo, taasoo xiiso badan u yeeli doonto kubadda cagta dalka Talyaaniga xili ciyaareedka soo socda.